Madaxweynaha iyo Maamulaha cusub ee San Diego Tourism Authority ayaa la magacaabay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Madaxweynaha iyo Maamulaha cusub ee San Diego Tourism Authority ayaa la magacaabay
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Julie Coker Waxay Qaadataa Hogaanka Hay'ada Dalxiiska San Diego
Julie Coker ayaa la wareegtay xilka madaxweynaha cusub iyo agaasimaha guud ee shirkadda Hay'adda Dalxiiska San Diego (SDTA) maaddaama ururku uu billaabayo inuu soo saaro qorshihiisa soo-kabashada ee warshadaha dalxiiska maxalliga ah, ee sida xun ay u saameeyeen Covid-19 dhibaato. Coker, oo ah ruug-caddaa wershad soo-dhawayn leh oo in ka badan 30 sano oo khibrad ah leh, ayaa yimaadda San Diego ka dib markii uu noqday madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee Filadelfia ee Shirka iyo Booqdayaasha.
Asal ahaan, Coker waxay ahayd inay ka bilawdo kaalinteeda cusub SDTA bishii Maarso laakiin waxay dib u dhigtay taariikhdeeda bilowga si ay u caawiso Shirka Filadelfiya iyo Xafiiska Booqdayaasha si ay ula socdaan masiibada socota. Intii lagu gudajiray kala-guurkaas, Coker waxay iska dhiibtay mushaharkeeda si xubnaha kooxda saacad kastaa usii wadan karaan shaqada.
In kasta oo ay jiraan waqtiyo adag, Coker waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ka caawiso San Diego dalxiiskeeda dalxiiska inay dib ugu soo laabato ganacsigeedii isla markaana ay u dhisto sumcaddeeda inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee la tagayo.
"San Diego shaki kuma jiro inay tahay goob gaar ah oo martida siisa waayo-aragnimo fara badan oo laga helo xeebaheena iyo biyaheenna ku teedsan xaafadahayada kala duwan ee firfircoon iyo farshaxankeenna hodanka ah iyo dhaqanka," ayuu yiri Coker. Waxaan rajeynayaa inaan ka caawiyo sidii aan adduunka ugu sheegi lahaa sheekada San Diego oo aan u soo jiidan lahaa dad badan oo soo booqda iyo ganacsato badan si ay uga faa'iideystaan ​​dhaqaalaheenna maxalliga ah.
Gudoomiyaha Gudiga SDTA Daniel Kuperschmid ayaa sheegay in ururku nasiib u yeeshay in Coker uu mas'uul ka noqdo xiliyadan adag.
“Julie waxaa caan ku ah dhamaan warshadaha iyada oo ah hogaamiye firfircoon oo wanaagsan. Isku darka waaya-aragnimadeeda iyo dabeecadeeda wax-qabadka waxay qiimo weyn ugu fadhidoontaa ururka iyo bulshada dalxiiska maxalliga ah inta aan bilaabaneyno soo kabashadeenna, ”ayuu yiri Kuperschmid. Waxay sidoo kale keentaa aragti cusub iyo xamaasad halka ay u socoto oo u adeegi doonta SDTA iyo San Diego si wanaagsan. ”
Kahor muddadeedii madaxweynenimo iyo agaasime guud ee Philadelphia Convention and Visitors Bureau, Coker waxay u shaqeysay madaxweyne ku xigeenka fulinta ururka. Coker waxay 21 sano la qaadatay Hyatt Hotels, halkaas oo ay jagooyin maamule guud ka qabatay guryaha ku yaal Philadelphia, Chicago iyo Oakbrook, Illinois. Guulaha badan ee ay gaadhay, Coker waxay u adeegtay gudoomiye ahaanta American Hotel & Lodging Women's Women in Lodging Council, iyo sidoo kale gudoomiye kuxigeenka Kulamada Ururka Socdaalka ee Maraykanka oo loola jeedo Ganacsi. Intaa waxaa dheer, iyadu waa xubin ka tirsan Bulshada Qaranka ee Dadka laga tirada badan yahay ee martigelinta iyo cutubka Philadelphia ee Xiriirada, Isku-darka. Waxay ka soo shaqeysay guddiyada latalinta ee Madaarka Caalamiga ah ee Philadelphia, Boy Scouts of America - Cradle to Liberty Council, Iskuulka Martigelinta iyo Dalxiiska ee Jaamacadda Temple University iyo Xarunta Magaalada ee Philadelphia Center. Waxay u shaqeysay inay aheyd qasnaji Ururka Dhacdooyinka Bandhigyada Caalamiga ah (IAEE). Waxay u adeegtaa guddiyada fulinta ee Ururka Socdaalka Mareykanka, Goobaha Caalamiga ah iyo Rugta Ganacsiga Weyn ee Philadelphia. Ugu dambeyntiina, waxay u adeegtay duqa magaalada Philadelphia Jim Kenney kooxdii kala-guurka ee mataleysay waaxda safarka.
Doorkeeda cusub, Coker waxay toosin doontaa maaraynta iyo horumarinta istiraatiijiga ah ee SDTA si loo hubiyo iibinta wax ku oolka ah, suuqgeynta iyo dhiirrigelinta gobolka si looga faa'iideysto dhaqaalaha bulshada San Diego. Waxay sidoo kale u adeegi doontaa hogaamiye bulsho oo muhiim ah oo lashaqayn dhaw la leh saraakiisha magaalada iyo degmada, ururada warshadaha dalxiiska ee maxalliga ah iyo adduunka oo dhan, iyo ganacsatada si loo hubiyo koritaanka iyo daryeelka warshadaha dalxiiska.
Waxay bedeshay Joe Terzi, kaasoo ku dhawaaqay inuu howlgab noqday 2019 kadib 10 sano oo uu shaqeynayay. Terzi wuxuu sii waday hogaaminta SDTA inta lagu gudajiray kala guurka, isagoo si rasmi ah xilka uga degay May 30.Wuxuu ku sii nagaan doonaa firfircoonida bulshada maxalliga ah, isagoo ka shaqeyn doona guddiga San Diego Dalxiiska Dalxiiska Degmada wuxuuna sii wadaa shaqadiisa ku aaddan dadaallada Balboa Park.